OUTBermuda: Asehoy ny avonavonao ary fantaro ny zonao
Home » LGBTQ » OUTBermuda: Asehoy ny avonavonao ary fantaro ny zonao
Amin'ny volana ho avy, ny Bermudianina avy amin'ny sokajin-tontolo rehetra dia handray an'izao tontolo izao hiara-mankalaza ny hetsika Pride Pride voalohany ao amin'ny nosintsika. Miteny ho an'ny OUTBermuda, ity koa dia dingana lehibe hankalazana ireo fahombiazantsika mitohy LGBTQ ny zonay, ao anatin'izany ny làlana mandresy antsika amin'ny fitovian'ny fanambadiana ho antsika rehetra, ary ny fotoana hiomanana amin'ny fotoam-pitsarana farany antsika eo alohan'ny Filankevitry ny Privy UK, izay mbola tsy azo antoka ny datiny
Rehefa nanambarana voalohany ny fankalazana ny Pride Bermuda, dia nahita maso ny tatitra momba ny kabary feno fankahalana sy fankahalana mifototra amin'ny fironana ara-nofo sy ny maha-lahy na maha-vavy ary koa ny ahiahy momba ilay fivoriana izahay. Na dia mankalaza ny fitiavan'ny mpiara-monina sy ny maha-olona ary ny avonavona aza isika dia ny fiarovana sy ny fahamendrehana ho an'ny tsirairay avy no zava-dehibe indrindra amintsika.
OUTBermuda dia tsy vonona ary tsy mahay manome torohevitra ara-dalàna. Na eo aza izany, nanasa ny mpiray dina sy mpanohana anay izahay, mpisolovava Peter Sanderson, hanampy amin'ny fampianarana anay tsirairay momba ny fiarovana omena anay araka ny lalàna Bermuda izay natao manokana hiarovana ny olona mety iharan'ny fanararaotana na fandrahonana feno fankahalana.
Skema fisotroan-drononon'ny mpiasan'ny fizahantany ao Jamaika: mari-toerana ho an'ny fizahan-tany eran-tany
Nomelohin'ny fitsarana Dubai higadra 10 taona an-tsokosoko ny mpizahatany anglisy mpanondrana zava-mahadomelina